महिला अधिकारका लागि अर्को जनआन्दोलन आवश्यकः पुरुष मात्र होइन महिला नेतृत्वविरुद्ध पनि लड्ने बेला आयो |
महिला अधिकारका लागि अर्को जनआन्दोलन आवश्यकः पुरुष मात्र होइन महिला नेतृत्वविरुद्ध पनि लड्ने बेला आयो
पुरुष मात्र होइन महिला नेतृत्वविरुद्ध पनि लड्ने बेला आयो
प्रकाशित मिति :2015-04-24 15:16:27
ललितपुर, वैशाख ११ । आज नवाैं लोकतन्त्र दिवस। जनआन्दोलन २०६२/६३ ले २ सय ४० वर्ष लामो निरकुंश राजतन्त्र अन्त्य गरेर जनताको शासन स्थापित गर्न सफल दिन। त्यो आन्दोलनमा सवै वर्ग, क्षेत्र, तह र तप्काका नागरिकको अभुतपूर्व सहभागिता थियो। देशको आधा जनसंख्या ओगटेका महिलाले यस आन्दोलनलाई सफल पार्न अतुलनीय योगदान दिए। आन्दोलनमा शहिद भए।
चुलाचौका छोडेर गाउँ–गाउँबाट थाल, लालटिन, नाङ्लो र कुचोसमेत लिएर महिला जनआन्दोलनमा सहभागी भए। तर, जनआन्दोलनमा महिला सहभागिताको लहरलाई नेतृत्वले बिर्से पनि ती महिलाले बिर्सेका छैनन्। जनआन्दोलनका बलमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले महिलाको पक्षमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्यो। २०६३ जेठ १६ गते सबै सांसदहरूको पहलमा विद्या भण्डरीले संसदमा ल्याएको संकल्प प्रस्तावले राज्यका हरेक संरचनामा एक तिहाइ महिला सहभागिता र आमाका नाममा नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न कोसेढुङ्गा सावित भयो।
तातो फलामलाई कुटे मात्र त्यसले उपयुक्त आकार लिन्छ भन्ने भनाइ चरितार्थ गर्दै जनआन्दोलनको ताप नसेलाउँदै आएको त्यो अग्रगामी प्रस्तावले महिलाका लागि सहभागिताको ढोका खोल्यो। यो संकल्प प्रस्तावले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई समावेशी बनाउन बाटो खोल्योे।
उक्त व्यवस्थाले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समेत स्थापित गर्यो। त्यसपछि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेत एक तिहाइ महिला सहभागिताको कुरा लेखिन थाले। सार्वजनिक बक्तव्य होस वा भाषण यसले निकै लोकप्रियता पायो। महिला उत्साहित भए। यसैअनुसार २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो। तर त्यसयता सरकार गठनलगायत अन्य नियुक्तिमा संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै महिला नेता आक्रोशित भएका छन्।
नेकपा (एमाले) नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएपछि नेतृत्वले आफ्ना प्रतिवद्धता अनुसार गरेका संवैधानिक व्यवस्था बिर्संदै गएको बताउँछिन्। ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो तर नेताहरूको सामन्ती र पित्तृसत्तात्मक सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन भएन, समस्या यही हो,’ उनी भन्छिन्।
ठूलो बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र र यसका उपलब्धि संस्थागत गर्न चाहिने नीति, नियम नबन्दा अधिकार स्थापित हुन नसकेको शाक्यको ठहर छ। दलको नेतृत्वमा भएको संकिर्णताको अन्त्य नभएसम्म अधिकार स्थापित हुनु असम्भव हुँदै गएको उनी बताउँछिन्।
अव संविधान, दल, सरकार र नीतिहरूलाई महिलाअनुकूल बनाउन एउटा दह्रो वैचारिक संघर्षका लागि महिला तयार हुनुपर्ने उनको राय छ।
नेपाली कांग्रेस नेता पुष्पा भुषालको विचारमा लोकत्रन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको महिलाका मुद्दामा राष्ट्रिय वहस हुनु हो।
जनआन्दोलनपछि महिला अधिकार स्थापित गर्न दलको नेतृत्व तहबाट भएका पहल, उनीहरूको प्रतिवद्धताले आम नेपाली महिला उत्साहित भए। ‘आमाको नाममा नागरिकता, राज्यका हरेक निकायमा महिलाको एक तिहाइ सहभागितालगायतका कुरा संविधानमा लेख्दा विवादित भएनन्,’ अन्तरिम संविधान २०६३ को मस्यौदा समितिमा समेत रहेकी भुषाल सम्झिन्छिन्। तर, अहिले यसको कार्यान्वयन गर्न किन आनाकानी भइरहेको छ? के कुराले बाधा दिइरहेको छ? उनको प्रश्न छ।
महिला अधिकार स्थापित गर्न हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनले केही न केही उपलब्धि दिएको छ तर जव आन्दोलनको राप सेलाउँदै जान्छ अनि ती उपलब्धि संस्थागत गर्न आवश्यक नीति, नियम र कानुन नबनाउँदा आन्दोलनले दिएको जनादेशलाई पनि बिर्संदै जाने प्रवृत्तिले नेपाली महिलाको अवस्था सुधार हुन नसकेको नेता भुषालको विश्लेषण छ।
साथै यसमा महिलाको पनि आफैँमा कमजोरी रहेको भुषालको टिप्पणी छ। ‘आन्दोलनमा होमियौं, उपलब्धि स्थापित गर्‍यौं तर त्यसलाई साकार पार्ने बेलामा महिला निष्त्रि्कय भए, उनीहरूको आवाज कमजोर भयो,’ उनले भनिन्। नेतृत्वमा भएका कतिपय महिलाले यसलाई साकार पार्न दलभित्र नलडेको उनको अनुभव छ। अहिले महिला माथिको हिंसा झन चर्को भएको, दुई वर्षकी बालिकासमेत बलात्कृत भएका बेला उनीहरूले न्याय नपाएको भुषालले बताइन्।
उनीहरूले न्याय पाउने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जत्तिकै भएको छ,’ पुष्पा भन्छिन्। उनका अनुसार, यसको अन्त्यका लागि भएका कानुन समेत कार्यान्वयन हुन नसक्नु अझै पनि सामाजिक सोच, मूल्यमान्यता र संस्कार यी कानुन भन्दा बलिया छन्। हाम्रो राजनीतिक नेताले यी मूल्यमान्यता, सोच र संस्कारलाई कति पनि छाडेका छैनन्। उनीहरूमा भएको यो सोच, संरचनागत विभेदको अन्त्य र यसलाई तोड्न एउटा ठूलो परिवर्तन आवश्यक भएको भुषाल बताउँछिन्।
यसमा एनेकपा माओवादी नेता कल्पना धमलाको पनि सहमति छ। १० वर्षको ‘जनयुद्ध’ले महिलामा ल्याएको राजनीतिक चेतनाले जनआन्दोलन सफल भएको उनको ठहर छ। ‘जनआन्दोलनबाट बलियो भएकोे आवाज अहिले नवौं लोकतन्त्र दिवस मनाउँदासम्म त कतै पनि सुनिँदैन’ उनले भनिन्, ‘गए ज्यान, जिते संसार’ भनेर युद्धमा होमिएका हामीले यो दिन देख्नुपर्ला भनेर सोचेकै थिएनौं।
महिलाका मुद्दालाई साझा बनाउन दलभित्रै नेतृत्वमा रहेका महिला तयार नभएको उनको आरोप छ। ‘दलमा नेतृत्वमा भएका महिला यी उपलब्धिलाई संस्थागत गरी परिणाममुखी बनाउन लड्दै लडेनन्। अव दलको पुरुष नेतृत्वविरुद्धमात्रै होइन महिला नेतृत्वविरुद्ध पनि लड्नुपर्ने देखिएको उनी बताउँछिन्।
धमलाका अनुसार यी अधिकार संस्थागत गर्न नेतृत्वमा भएका महिला बोल्दा आफूले पाएको पद प्रतिष्ठा गुम्ला भनेर त्वम शरणम् गरिरहेका छन्। उनीहरू अधिकारको भन्दा पनि शक्तिको पुजारी भएका कारण तिनकैविरुद्धमा अवको लडाइँ हुनु जरुरी रहेको उनको धारणा छ।
‘दोस्रो पुस्ताका महिला नेताले यसका लागि बलियो आवाज उठाएका छन् तर उनीहरूको पहुँच त्यहाँसम्म छैन र तिनै नेतृत्वमा रहेका महिला पनि यी आवाजविरुद्ध छन्,’ धमला भन्छिन्।
पहिलो संविधान सभामा महिला अधिकार स्थापित गर्न गरिएको प्रयास स्मरण गर्दै उनले भनिन् ‘दोस्रो संविधान सभामा सहभागी महिलाले त एउटा महिला ककससम्म बनाउने आँट गरेनन्। उनीहरूले महिलाअनकूल संविधान बनाउन के आवाज उठाउलान् र? त्यसैले पहिलो संविधान सभामा महिला अधिकारका लागि लेखिएको मस्यौदा अहिलेको संविधानसभाले स्वीकार गर्नुपर्छ।’